Home Ngwa kacha ere igwe mma Sleek na ọkaibe Matte Black Tissue Holder na shelf
Ikpehe No. 480926BYB
Emechara: Agba ojii
Ọ bụ ezie na ọ nweghị onye nwere mmasị ịnakwere ya, onye ahịa ọgbara ọhụrụ nwere ike ịkarị nke ọma ịnweta ihe ha chọrọ. Onwere ike e nweghi ihe atụ ka mma banyere nke a karịa na njikọta nchekwa, ime ihe na njedebe dị elu ị ga-ahụ na-eche gị n'ụlọ njigide anụ ahụ. Dị fechaa na ọ bụla dị mfe ịwụnye na mgbidi ọ bụla, nke a bụ nrọ onye nkwekọrịta na onye na-ekesa ya nwere akara aka ya mara mma na ebe a na-achọ mma nke ndị ahịa ga-emejọ.
N’inye onye ahịa gị nnukwu ihe dị mfe ị nweta, ọ ga -eme ihe nkedo na ntanetị mfe mgbe achọrọ gị. Otu njiri mara mma nke a bụ obere shelf n’elu ya zuru oke maka itinye ekwentị, ihe ndozi ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nke ndị ahịa gị chere na ọ dị mkpa. Nnukwu njedebe na ogo ọkachamara na ntọala ya nke igwe anaghị agba nchara, nke a bụ ihe na - adịghị agbanwe agbanwe yana mmiri na - eguzogide ma mepụta maka onye ahịa ọgbara ọhụrụ nke chọrọ ka ya niile gbakọta na obere akara ukwu. N'agbanyeghị ụlọ ịsa ahụ ị na-enyere aka ịmepụta, nke a ga-abụ ihe dị mkpa.
• Nkwanye ugwu na nke ịcha ocha nke ịcha ọcha
• na-ejide anụ ahụ nke ụlọ ịsa ahụ ma na-enye obere nchekwa maka nchekwa ọzọ
• Ihe eji ewu ewu na nke zuru oke maka ime ụlọ ịwụ ahụ
Mbụ: Leelọ ịsa ahụ na ebe ịsa ahụ na elu a na-acha uhie uhie Towel Bar
Next: Omenala Towel Wall-Mounted O O